Mahakasika ilay areti-mifindra COVID-19 | cco-covid19.gov.mg
Inona ny atao hoe
Aretina nipoitra tany Sina tamin’ny faran’ny taona 2019 ny COVID-19, fitambaranan’ otrik’aretina maro avy amin’ny tsimokaretina « corona ». Tany amin’ny biby no nipoiran’io aretina io saingy mifindra amin’ny olombelona. Toy ny fambara rehefa voan’ny sery no hisehoany, mety arahana olana eo amin’ny fitaovam-pisefoana ary mety hiafara amin’ny fahafatesan’ny marary aza.
Ny fepotoana iombony amin’ny olombelona dia manodidina ny 1 hatramin’ny 15 andro eo izany.
Ahoana ny FIFINDRANY?
Olona mitondra ny tsimokaretina no mamindra azy ary mifindra amin’ny piti-drora. Rehefa mievona, mikohaka dia mety mipitika eny amin’ny fitaovana manodidina ny rora. Izay olona mifampikasoka amin’iny fitaovana iny araka izany dia mety ho voa, raha mikoso-maso, misikotra orona. Mety misy olona tsy misy fambaran’aretina, tsy marary nefa mitondra ny tsimok’aretina, mety mamindra aretina ihany koa izy ireny. Mila arahana araka izany ireo toro-marika ho fisorohana ny aretina.
Inona avy ireo soritraretina hamatarana azy?
Hafanana, harerahana, koha-maina, orona tsentina, tenda marary, fivalanana, fahasemporana.
Ny fambara tena hita matetika amin’ny olona tratran’ny tsimok’aretina “corona” dia fisian’ny maripana ambony, harerahana sy koha-maina. Mety harary ny vanin-taolana, hisy sery na aretin-tenda ary fivalanana ihany koa. 80% ny olona voan’ny COVID-19 dia sitrana tsy mila fitsaboana manokana. Mety hisy fahasarotany anefa ny aretina amin’olona sasany ka mila fitsaboana sy fandraisan-tanana eny anivon’ny tombim-pahasalamana. Ny be antitra sy ny olona manana aretina mitaiza no tena marefo manoloana ny aretina. Raha mampiseho ireo fambara ireo ianao dia mila miantso mpitsabo na ny laharana natokana hoan’ny fikarakarana ny COVID-19 (913) na raha tena efa mampiahiahy ilay tranga dia avy hatrany dia miantso ny laharana 914, handray an-tanana anao avy hatrany ny Brigade intervention Spéciale COVID-19.
Inona ny avy ireo FEPETRA tokony atao HIAROVAN-TENA?
Araho hatrany ireo vaovao ofisialy mahakasika ny ady atao amin’ny COVID-19 na eto amin’ity tranokala ity na amin’ny alalàn’ny TVM sy RNM , isan’andro amin’ny 1 ora atoandro sy amin’ny 7 ora alina. Ny fihetsika tsara azonao atao mba hampihenana ny fiparitahan’ny COVID-19 dia:
Manasa tanana amin’ny savony sy rano matetika. Raha tsy misy savony sy rano dia mampiasa “gel disinfectant” na alikaola 60% farafaharatsiny.
Tapenana amin’ny sandry ny orona na ny vava raha toa ka mievina na mikohoka.
Hajao ny elanelana iray metatra amin’ny olona.
Fadio ny mandrehoka na mandrora amin’ny tany
Mitondra takom-bava na “cache bouche” rehefa mivoaka ny trano na ao ampiasana
na eny an-dalam-be.
Mijanona ao an-trano araka raha mbola azo atao, aza mivoaka raha tsy noho ny antony tsy azo ialana. Tsy mbola misy vaksiny amin’izao fotoana izao mba hiarovana anao amin’ny tsimok’aretina COVID-19. Raha manavy dia fehezo ny tenanao, mijanona ao an-trano ary maka aina. Antsoy ny 913 ary araho ireo toro-marika avy amin’ny fitondrana mahefa.
Mila manao TAKOMBAVA ve hiarovan-tena?
Mandritra ny amehana ara-pahasalamana andiany faharoa eto madagasikara, dia entitra ny fitondram-panjakana, tsy maintsy manao takom-bava ny olona rehetra mivoaka ny tranony. Tafiditra ao anatin’ireo fepetra noraisin’ny fitondrana izany
Hafiriana no VELONA amin’ny faritra IVELAN’NY VATAN’OLOMBELONA ny covid-19?
Tsy mbola fantatra mazava ny fe-potoana mahavelona ny tsimok’aretina COVID-19 ivelan’ny vatan’olombelona. Ny fikarohana natao dia mampiseho fa mety haharitra ny fivelomany arakaraka ny itoerany.
Mila diovana ny toerana rehetra ahiana hisy ny tsimok’aretina ary manasa Tanana amin’ny rano sy savony rehefa avy eo. Fadio ny mikitika ny maso sy ny orona rehefa manadio.
Iza ireo olona tena ATAHORANA HANDAIRAN'NYCOVID-19?
Atramin’izao aloha dia hita fa ireo olona efa mahazo taona sy marefo ara-pahasalamana na manana areti-mitaiza no tena lasibatry ny COVID-19. Ireo zaza, ankizy sy tanora kosa dia ambany ny taham-pahavoazan’izy ireo.
Efa misy FANAFODY na FITSABOANA manasitrana na misoroka ny covid-19 ve?
Covid Organics no fanafody navoakan’ny Institut malgache des Recherches Appliquées (IMRA) ary efa nanaovana fanandramana tamin’ireo marary teto an-toerana. Efa afaka ampiasaina eto Madagasikara arak’izany.